Monday August 31, 2020 - 12:34:51 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Shirkadda Alcaal ee laga leeyahay Yahuudda ayaa iclaamisay in duulimaadkii ugu horreeyay ay ku daah furtay heshiiskii dhaxmaray Talaabiib iyo Abu Dubai kaas oo ah in caadi laga dhigo dhammaan cilaaqaadka ka dhaxeeya labada dhinac.
Duulimaadka diyaaraddan oo ah hanaan ganacsi waxay sii martay hawada dowladda sacuudiga kadibna waxay cagata dhigatay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Abu Dubai.
Diyaaradda ayaa sidday wafdi American iyo Yahuud ah waxaana kala hogaaminaya Jaareed Kooshnar taliyaha Trump ee bariga dhexe iyo mas'uul ka socda xafiiska Bin yamiin Netenyaahu R/wasaaraha Yahuudda.
Socdaalka wafdigan ayaa la sheegay in uu gogol xaar uyahay xaflad weyn oo laysugu geyn doono madaxda Yahuudda iyo kuwa imaaraatka Carabta oo bisha soo socota ee September dhici doonta waxaana ka qeyb geli doono Trump iyo maxamed Bin Zaayad R/wasaaraha Yahuudda.
ilo wareedyo ayaa usheegay in warbaahinta mareykanka iyo qorshahan isbedelka cusub ah ee imaaraatku ku dhaqaaqay uu wax ka ogyahay Max'med Bin Salmaan dhaxal sugaha Aala sacuud oo qudhiisa dhanka hawada ufuray Yahuudda.
Dhinaca kale qarax xooggan ayaa ka dhacay maqaayad laga cunteeyo oo kutaal magaalada Abuu Dubai, sarkaal u hadlay booliska ayaa sheegay in qaraxu uu ka dhashay haamo gaaska lagu keydiyo.
Markii uu qaraxu dhacay kadib ayaa laxiray dhammaan waddooyinka muhiimka ah ee magaalada waxaana la arkayay goobaha ganacsiga oo haawanaya
Maleeshiyaad Oromo ah oo 100 qof Amxaara ah ku dilay dalka Itoobiya.